Direct Response Copywriting ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ကူးပြောင်းကြောင်းကူးယူရေးသားဖို့ဘယ်လို | Martech Zone
Direct Response Copywriting ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ကူးပြောင်းကြောင်းကူးယူရေးသားဖို့ဘယ်လို
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 6, 2018 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2018 Douglas Karr
ပျမ်းမျှဆောင်းပါးရိုးရှင်းစွာဖျော်ဖြေဖို့သွားမဟုတ်ပါဘူး။ ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးများမှတစ်ဆင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်ကျွန်ုပ် ဆက်လက်၍ အံ့အားသင့်မိသော်လည်းဆောင်းပါးကိုစတင်ဖတ်ရှုသောအခါပျင်းစရာ၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်တည်းကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတည်းနှင့်ပင်မြေစာမျက်နှာနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါကအရည်အချင်းပြည့်ဝသောစာရေးဆရာတစ် ဦး ရေးသားသောစာမူသည် ပို၍ အာရုံစူးစိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံပါသည်။ ဘေးထွက်မှတ်စုတစ်ခုမှာငါဟာစာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲပဲ။ ငါ 10 နှစ်ရေးသားခြင်းနှင့်ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
Koeppel Direct ၏မကြာသေးမီကအချက်အလက်များ၊ Direct Response Copywriting: ကူးပြောင်းသောကူးယူခြင်းကူးယူခြင်း, ထိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန် copywriting လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ် ဦး ပိုမိုကျယ်ပြန်ကမ္ဘာနှင့်ဝေမျှပေးသည်။ လူသတ်သမားတစ် ဦး အားတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မှု (DR) အားမည်သည့်အချိန်တွင်မွမ်းမံရမည်ကိုလေ့လာပါ၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်အကြိုက်ဆုံး copywriters များကသင့် ဦး ဆောင်မှုကိုဖောက်သည်များထံမှအနှိပ်ခံရန်သူတို့၏မှော်လက်ချောင်းများကိုအသုံးပြုပုံကိုလေ့လာပါ။
Direct Response Copy ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မှုဆိုသည်မှာသင်ပကတိအရေးယူမှုပြုလုပ်ရန်သင်အလိုရှိသည့် copywriting သို့မဟုတ်ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (သို့) ကြော်ငြာသည်တိုင်းတာနိုင်သောချက်ချင်းတိုင်းတာနိုင်သောရလဒ်များအတွက်အမြဲတမ်းခေါ်ဆိုမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပုံစံတစ်ခုသည်ဖြည့်စွက်သည့်နေရာသို့မဟုတ်ကလစ် နှိပ်၍ ဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စေသည်။ Landing စာမျက်နှာများသည်အမြဲတမ်းတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မိတ္တူကိုအသုံးပြုသည်။
Peter Koeppel မှသင်စတင်နိုင်ရန်တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မှုကော်ပီရေးသည့်အကြံပြုချက် ၅ ချက်ကိုထောက်ပြသည်။
သင့်ရဲ့မိတ္တူများအတွက်ရည်မှန်းချက်များဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်ဖိနပ်များရောင်းနေသလားသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အားလှူဒါန်းရန်ကြိုးစားနေပါသလား။
သင့်လမ်းကြောင်းကိုစီစဉ်ပါ သင်မည်သို့ထိုရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရန်သွားမည်နည်း ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအကျဉ်းချုပ်အတွက်အချိန်ပါ။
သင်၏တန်ဖိုးကိုပြသရန်ပြင်ဆင်ပါ။ သင်စားပွဲသို့မည်မျှတန်ဖိုးထားသည်ကိုအမြဲတမ်းပြပါ၊ ဘယ်တော့မှမပြောပါနှင့်။ ပစ်မှတ်ဟာသင်တောင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်သင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစာရင်းပြုစုပါ။
အချက်များကိုစီစဉ်ပါ သင့်ရဲ့ကန ဦး ရည်မှန်းချက်အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိနိုင်ရန်အတွက်သင်၏စာရင်းတွင်။
သတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ချက်မိတ္တူကိုကြိုတင်စီစဉ်ရန်၊ ရေးရန်နှင့်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အဆင့်တစ်ခုစီကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ စကားလုံးရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုသည်စာဖတ်သူကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဥပမာအချို့ကိုလည်းပေတရုဖော်ပြခဲ့သည်။
"အခွင့်အရေးအစား "တစ်ချိန်ကတစ်သက်တာ၌တည်၏။ " တကယ့်တစ်သက်တာမှာတကယ်လား? မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ဘာကြောင့်၎င်းကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံရောင်းချမည်နည်း။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ရယူပါ!
"ရှာဖှေတှေ့"ဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူး။ " ၏အရပျ၌ သင်တစ်ခုခုရောင်းချနေသည်ဆိုပါစို့၊ ထိုအရာကိုသင်မြင်ရပြီ၊ အနည်းဆုံးအစစ်အမှန်ဘဝရှိသူတစ် ဦး ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံတွင်။
"အထူးအခွင့်အရေးရှိသော“ မြန်မြန်!” ကျော်။ အချိန်သည်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အသုံးများလွန်းသဖြင့်၎င်းတွင်စွမ်းအားလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ကမ်းလှမ်းမှုများသည်လုံးဝမသွားနိုင်ပါ။
ဒီမှာအပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက် Direct Response Copywriting: ကူးပြောင်းသောကူးယူခြင်းကူးယူခြင်း:
Tags: ကော်ပီကူးခြင်းကူးစက်ပုံသေနည်းcopywriting အကြံပေးချက်များctaတိုက်ရိုက်မိတ္တူတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မိတ္တူဘယ္လိုinfographicတိုက်ရိုက် koeppelpeter koeppelဘာဖြစ်သလဲတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲစကားများအရေးအသားအကြံပေးချက်များ